Tsy maharesy lahatra anay ny famahana ny olana ataon’ny governemanta Mahafaly Olivier ankehitriny, hoy izy. Tokony hataon’ny ety amin’ny Antenimieram-pirenena sy ry zareo eo anivon’ny mpanatanteraka vain-dohan-draharaha mihitsy ny amin’ity resaka pesta ity fa miriorio be tsy mahatombina mihitsy ny sain’ny vahoaka amin’io ankehitriny. Ho an’ny distrikan’Ikongo manokana dia kaominina iray ihany dia ny any Maromandia no voakasiny. Ity depiote ity dia nitondra tatitra nivantana teo anivon’ny fivoriamben’ny Antenimieram-pirenena ny alarobia teo ny nisian’ny firotsahan’ny oram-batravatra tany amin’ny kaominin’i Bala any Ikongo ka nilatsahan’ny havandra ohatry ny totohondry namotika sekoly niisa 6 be izao sy fiangonana ihany koa ary nametraka fahasahiranana ho an’ny vahoka miisa 400 be izao izay lasa traboina tsy fidiny. Sarotra koa ny famatsiana sakafo any amin’ny distrikan’Ikongo manontolo ankehitriny, hoy ity depiote ity, noho ny haratsin’ny lalana any an-toerana. Tsy nisalasala ity solombavambahoaka ity nanao antso avo ny mba hijerena ny distrikan’Ikongo.